Svika pakuziva mashandiro anoita Safari pane iyo iPad | IPhone nhau
IPad nhau | | iOS 8
Zvishoma nezvishoma, Apple's Safari browser yakavandudza zvakanyanya mashandiro ayo zvese mushanduro yeOS X uye mune vhezheni yeIOS. Mune ino yazvino vhezheni yeIOS uye OS X, ndinofanira kubvuma kuti yakandimanikidza kuti ndisiye Chrome browser zvachose, pamwe nekuda kwekushandisa kwakanyanya bhatiri kunyanya muOS X uye huwandu hwakawanda hwezvinhu zvaunoshandisa kubva palaptop yangu. Neraki neSafari, ndinokwanisa kuwiriranisa, sezvandakaita neChrome, mabhukumaki pamidziyo yangu yese, zvekuti kana ndikawedzera webhusaiti kune vandinoda, zvinobva zvango wedzerwa pazvinhu zvese, sekureba sekunge iine iCloud sarudzo inogoneswa pane zvese ivo.
Iko kushanda kweSafari kuri nyore kubvira, sezvazvinowanzoitika mumaApplication, zvine sarudzo. Asi nekuda kwemabhatani anotibatsira kufamba, tinogona kumhanyisa kunyange kugadzirisa nzira yatino famba nayo kuburikidza ne iPad yedu. Pazasi isu tinokuratidza iko kwechipiri kushanda kwemabhatani anowanikwa kumusoro kwebrowser yePadad yedu uye nemabasa aanovanza.
Kana isu tadzvanya pachiratidzo +, Safari inozovhura otomatiki hwindo rekufambisa uko kwatichafanirwa kuisa iyo url iyo yatinoda kushanyira kana iyo pfungwa yatinoda kutsvaga mubrowser yatakatangisa nekukanganisa. Kana tikadzvanya + chikwangwani uye tobatisisa pasi, hwindo rinozoonekwa richiratidza ichangoburwa Dzichangobva kuvharwa eyelashes.
Patinodzvanya pabhuku rakavhurika, mabhukumaki atakachengeta muS Safari anoratidzwa. Asi kana tikabatisa chigunwe, Safari ichadaro ichapa sarudzo yekumaka iyo peji kwatinenge tiri panguva iyoyo kana wedzera kune iyo yekuverenga zvinyorwa.
Kana isu tichida kudzokera kune peji rapfuura isu tinongofanira tinya pa <sign as many times as necessary kusvikira tasvika kwatinoda kuenda. Kufanana nesarudzo dzakapfuura, tinogona kudzvanya uye kubata bhatani kuti Safari isu ratidza mapeji ese atakamboshanyira. Nenzira iyi, panzvimbo pekutsimbirira kanoverengeka pa <kuti tidzokere papeji kubva patakatanga, tinogona kubatisisa bhatani uye sarudza peji rekutanga nenzira inokurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 8 » Tora zvakadzama tarisa mashandiro eSafari paPad